MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ခေတ်သစ် လူ့ယဉ်ကျေးမှု နားမလည်တဲ့ ဦးဝီရသူ
ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းက ဦးဝီရသူ ကို မျက်နှဖုံးရှင် လုပ်ထားပြီး အကြမ်းဖက်သမား ဘင်လာဒင်နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းထားတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား တော်တော်များများအတွက် ဘ၀င် မကျ စရာ ဖြစ်လာရပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံသား ဖြစ်နေတဲ့ ဒူဝါ တို့လဲ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တလယ်လုံးပုပ်သွား တာပေါ့ကွာ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှက်တတ်တဲ့လူတွေ အတွက်တော့ ရှက်စရာကြီးပေါ့ကွာ... မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ အရိုင်းအစိုင်းကောင် ဖြစ်သွားတာကိုး။
မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်းအပြီးမှာ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း သတင်းထောက်က ဦးဝီရသူ ကို သွားဗျူးတဲ့အခါ ဘာပြောလဲ ဆိုတော့၊ ၉၆၉ ကို လူတွေက အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းလိုလို အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလဲ သိက္ခာကျနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကမ္ဘာက ဖြစ်ရပ်အမှန်သိရအောင် ပြောပြပေးပါ။ လို့ တောင်းဆိုသတဲ့။
အဲဒါကို ဦးဝီရသူ က ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံအကြောင်း ဘာမှ နားမလည်။ သူ့ခံစားချက်အတိုင်း မူဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောချလိုက်တယ်။ မိတ္ထီလာမှာ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်တာ သူပဲ ဦးဆောင်သလိုလို၊ ဗမာတွေလုပ်တာအားလုံးမှန်သလို၊ အဲဒီ လူသတ်ပွဲက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကာကွယ်သယောင် ပြောတော့ ပိုဆိုးပြီပေါ့။ တကယ်တော့ အဲဒီ သတင်းထောက်မျော်လင့်တာက ၉၆၉ ဆိုတာ အဲဒီ ကုလားသတ်ပွဲနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီး တစ်ပါး အနေနဲ့ မိတ္ထီလာလူသတ်ပွဲကို အားပေးခြင်းမရှိ၊ အဲဒီလို လုပ်တဲ့လူတွေကို ရှုံ့ချတဲ့ အကြောင်း၊ အဲဒီ ဥပဒေမဲ့လူသတ်တာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အကြောင်း၊ တွေ ပြောဖို့ မျော်လင့်တာပါ။
ဒူဝါက အဲဒီလို ပြောလိုက်ရင် ဦးဝီရသူ အဖွဲ့သားတွေက ဦးဝီရသူကိုယ်တိုင် လူသတ်တာ အားမပေးဘူး လို့ ပြောလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ... ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေကို သတ်စေ၊ လုပ်စေ လို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောစရာမလို၊ အရေးအကြီးဆုံးက အမုန်းတရား ဖြစ်ပွါးအောင် အကွက်ကျကျ ဝေဖန်တာနဲ့ကို လုပ်ချင်နေတဲ့ နောက်လိုက်တွေက စိတ်ချလက်ချ ဆက်လုပ်တော့တာပဲ။
ငယ်ငယ်တုန်းက မိဘ တွေက ဘယ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုပဲ ရိုက်တယ်။ ဒီတော့ မိဘ တွေ အားမပေးဘူး ဆိုတာ အလိုလို သိလာတယ်။ ရန်ဖြစ်တာ မကောင်းဘူး ဆိုတာ သိလာတယ်။ တချို့ မိဘ တွေက ရန်ဖြစ်ရင် အကျိုးအကြောင်းတွေ ရှောက်မေး၊ ကိုယ့်သားသမီးမမှားတဲ့ အကြောင်းတွေ ဆင်ခြင်လိုက်ပေး ဆိုတာနဲ့ ပိုဆိုးကုန်တဲ့ သားသမီးတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဘယ် မိဘ မှ ကိုယ့်သားသမီး တွေ အရပ်တကာ နဲ့ လိုက်ရန်ဖြစ်ဖို့ အားပေးတာတော့ မရှိ၊ တာပေမယ့် ရန်ဖြစ်တိုင်း မတားမြစ်ခြင်းကိုက သားသမီးအတွက် အားဆေး တခွက် ဖြစ်သွားတာ မသိကြပါ။ ငါမမှားရင် ပြီးတာပဲ၊ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဖက်က အမှန်လို့ ထင်ရင် ရန်ဖြစ်ဖို့ ၀န်မလေးတော့ပါ။ ရန်ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တိုင်းမှာ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အမြင်တွေ ကိုယ့်ဖက်က အမှန်လို့ ထင်တတ်တာချည်းပါ။
ဦးဝီရသူ နဲ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် အချို့လဲ သူတို့ ကိုယ်တိုင်တော့ လူသတ်တဲ့ နေရာ လိုက်ပြီး အားပေးမှာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ လူသတ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို အမှန်ခြစ်ပေး လိုက်ခြင်းဟာ မီးလောင်ရာလေပင့် ဆိုသလို ဖြစ်လာတယ်။ ပိုဆိုးတာက သူတို့ ကိုယ်တိုင် ပြောနေတဲ့ မူဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး တရားဟောချက်တွေဟာ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာရဲ့ Civilization သဘောထားအမြင်နဲ့ ကင်းကွာနေတယ် ဆိုတာ မသိတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အတိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဒီလို ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်အဆင့် ရှိတဲ့လူတွေဟာ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြား တွေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်တာ ခေတ်က မှန်တယ်လို့ လက်မခံတော့ပါဘူး။ အဲဒီလို ဆန့်ကျင်တဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တွေကိုလဲ အကြမ်းဖက်သမား အနေနဲ့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ဦးဝီရသူ ပြောတဲ့ အချက်တွေမှာ ဒူဝါ အနေနဲ့ လုံးဝ လက်မခံ နိုင်တဲ့ အချက်တွေ ရှိတယ်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်တဲ့ မဒိမ်းမှုရဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မူဆလင် တွေ ဖြစ်တယ်၊ မြန်မာတွေ ဒါမျိုးမလုပ်ဘူး၊ ဆိုတဲ့ အချက်။ (အစီရင်ခံစာ နဲ့ သုတေသန အထောက်အထား မပြနိုင်ဘူး။) သိပ်မကြာခင်ကပဲ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲဌာနချုပ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ လအတွင်း မဒိမ်းမှု ၆၁ မှု ဖြစ်ပွါးခဲ့တယ်၊ လို့ ဆိုပါတယ်။ မူဆလင် လို့ ပြောမထားပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားဒေသ တွေမှာ မဒိမ်းမှု ဖြစ်နေတာ မူဆလင်တွေ မဟုတ်ဘူး၊ ဗမာ စစ်တပ် ဖြစ်ပါတယ်။ (အမှန်အကန် အစီရင်ခံစာတွေ ရှိတယ်။)
(၂) မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ အကြမ်းမဖက်ဘူး လို့ ပြောတယ်။ အကြမ်းဖက်တယ် ဆိုတာ ခေတ်သစ် မူဆလင် အကြမ်းဖက်သမားများလုပ်သလို ဗုံးခွဲမှ သမုတ်တာ မဟုတ်။ မြန်မာဘုရင်တွေ ထိုင်းမှာ လုပ်သွားတာတွေ အများကြီးပါ။ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ဥပဒေမဲ့လူသတ်မှုတွေဟာလဲ အထင်အရှား ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီ တနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေဟာ အဆိုးဆုံးပါ။
(၃) မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေဟာ တခြားနိုင်ငံသွားရင် ပြဿနာ မရှာဘူး၊ အလုပ်ကြိုးစားပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေကြတယ်။ ကုလားတွေက ဒီလို မဟုတ်ဘူး၊ လို့ ပြောတယ်။ အမှန်ဆိုရင် အခု မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ မူဆလင်တွေက နိုင်ငံသားပါ။ ထိုင်းမှာ ခိုးဝင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်လို့ မကုန်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုင်း နိုင်ငံသားတွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေ ကို ယုကြည်တယ်။ မြန်မာတွေကို မုန်းပေမယ့် မြန်မာ မောင်းထုတ်ရေး မလုပ်ဘူး။ အဲဒါက တိုးတက်လာတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်လာဖို့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကို အလေးမထားလို့ မရတဲ့ အချက် ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဆိုးသွမ်းနေသောအခါ (တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
When Buddhist Go Bad
By Hannah Beech (Monday, July 1, 2013)
TIME မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးအား တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘင်လာဒင်လို့ သမုတ်ခံရတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ မျက်နှာဟာ ရုပ်ပွားတော်တစ်ခုကဲ့သို့ တည်ကြည် ငြိမ်သက်လျက်စွာနဲ့ တရားကို စတင်ဟောကြားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ကိုးကွယ်သူ ရာပေါင်းများစွာဟာ လက်အုပ်ချီပြီး ထိုင်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ကျောပြင်မှာတော့ ချွေးတွေစီးကျနေပါတယ်။ တရားနာ ပရိတ်သတ်ကြီးက သင်္ဃန်းဝတ်ရဟန်းနဲ့အတူ ရွတ်ဖတ်သံတွေဟာ မန္တလေးမြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်းကနေ လွင့်ပျံ့နေပါတယ်။ မန္တလေးဟာ ရန်ကုန်မြို့ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော် ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ မြင်ကွင်းကတော့ စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာကောင်းပေမယ့် ဦးဝီရသူရဲ့တရားတွေကတော့ မုန်းတီးမှုတွေ ရောယှက်နေပါတယ်။ ''ခုချိန်ဟာ ငြိမ်သက်နေရမယ့် အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။''ဟု သက်တော် ၄၆နှစ် အရွယ်ရှိ အဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးက မြွက်ကြားပါတယ်။ မိနစ် ၉၀ လုံးလုံး တရားဟောကြားတဲ့အထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူများစုရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေကို မုန်းတီးဖို့ ထည့်သွင်းဟောကြားနေပါတယ်။ ''အခုအချိန်မှာ အားလုံး နိုးကြားနေဖို့၊ သတိရှိဖို့ လိုပါတယ်။''
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သွေးပူနေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် များစွာသော မွတ်စလင်သွေးတွေလည်း မြေခခဲ့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရမ်းကား အုပ်စုတွေဟာ လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေကတော့ မူဆလင်တွေ ဆယ်ဂဏန်းလောက် သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ ပြောသော်လည်း နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး လုပ်ဆောင်သူတွေကတော့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အရေအတွက် ရာဂဏန်းအထိရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုအများစုဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ပိုင်း အစွန်အဖျားမှာ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံမဲ့မွတ်စလင်လူမျိုးစု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကနေ ယုံကြည်မှုအရ နှိပ်စက်ခံရဆုံး လူမျိုးစုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူတွေပါ။ ထိုကဲ့သို့ သွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဦးဝီရသူ နေထိုင်ပြီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့ တရားတွေဟောကြားနေခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအထိ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ အစွန်းရောက် ဘုန်းကြီးတွေဟာ သန်း ၆၀ သော မြန်မာပြည်သူရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို နိုင်ငံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသူအဖြစ် ရှုမြင်ကြပါတယ်။ ''မွတ်စလင်တွေရဲ့ မွေးဖွားနှုန်းဟာ အရမ်းကိုလျင်မြန်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ သမီးပျိုတွေကို ခိုးယူနေကြပါတယ်။ အဓမ္မကျင့်ကြံနေကြပါတယ်။'' ဟု ဦးဝီရသူက စာရေးသူကို ပြောပြပါတယ်။ ''သူတို့တွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံရွယ်နေကြပါတယ်။ ဒါကို လက်သင့်မခံနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမှာပါ။''
ဒီလိုအမုန်းစကားတွေဟာ လူမျိုးစု ၁၃၅ ခုကျော်နေထိုင်နေပြီး ရာစုနှစ်ဝက်ခန့် အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုကနေ မကြာသေးမီကမှ လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ထိရှလွယ်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ အာဏာရှင် လက်ထက်တုန်းကပင် ပြဋ္ဌာန်းမှုမရှိခဲ့တဲ့ တစ်မိသားစုကို ကလေး ၂ ယောက်သာ ယူခွင့်ရှိသည်ဆိုသည့် ပိတ်ပင်မှုကို အချို့သော အစိုးရအရာရှိတွေက ရိုဟင်ဂျာမိသားစုတွေအပေါ် ပြဋ္ဌာန်းဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖျားပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ ခရစ်ယာန်လူမျိုးစုတွေရဲ့အဆိုအရ အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ ခရစ်ယာန်အများစုပါဝင်တဲ့ ကချင်လက်နက်ကိုင်တွေကြားက တိုက်ပွဲတွေဟာ ဘာသာရေးမတူညီမှုကနေ ပေါက်ဖွားလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ အာရှရဲ့ ဒေသအများစုမှာ ပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ ယခုနှစ် သီရီလင်္ကာမှာ ထိပ်တန်း အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ အမျိုးသားရေး ဗုဒ္ဓ၀ါဒီအုပ်စုတွေဟာ သြဇာကြီးမားလာပြီး ဘုန်းတော်ကြီးတွေကနေ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ လှုံ့ဆော်လာကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကစလို့ လူပေါင်း ၅၀၀၀ လောက် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မွတ်စလင် သောင်းကျန်းမှုတွေရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ဘက်ဖျားမှာလည်း ထိုင်းစစ်တပ်က အရပ်သားတွေကို ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် သင်တန်းပေးခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းခံထွက်တဲ့အချိန်မှာ ဘေးကနေ ၀န်းရံ ပေးကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုက တောင်းဆိုနေပါတယ်။ အဆိုပါ စစ်သားတွေနဲ့ (လက်နက်သယ်ဆောင်တဲ့) အချို့ဘုန်းကြီးတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လူနည်းစု မွတ်စလင်တွေကို ဖယ်ကျဉ်ထားသလို ပိုမို ခံစားရစေပါတယ်။
အဲဒီ့နိုင်ငံတွေမှာ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်း သီးခြားစီရှိသော်လည်း များပြားလာတဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုတွေကြောင့် ဖေ့ဘုတ်နဲ့ တွစ်တာမှတစ်ဆင့် တဖက်သတ် အမုန်းပွားမှုတွေနဲ့ ကောလဟာလတွေ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လာပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ အလွယ်တကူပင် တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံသို့ ကူးစက်လာပါတယ်။ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား သိန်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဇွန်လအတွင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အချို့ အသတ်ခံရပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်တွေ အသတ်ခံရတဲ့အတွက် လက်စားချေမှုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုတွေ စတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကာလတုန်းက ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေ၊ မွတ်စလင် စစ်သွေးကြွတွေ၊ အစွန်းရောက် ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ရှေးရိုးစွဲ ဂျူးတွေ ထွန်းကားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အဆိုပါစက်ကွင်းကနေ လွတ်မြောက်နေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်း အတွက်တော့ အကြမ်းမဖက်ရေး၊ မေတ္တာထားရေးတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ လောက်က ပွင့်ထွန်းခဲ့တဲ့ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတွေကနေ ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အဓိပ္ပာယ် တစ်ထပ်တည်း ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားဘာသာဝင်တွေလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဟာလည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ ဂိုဏ်ဂဏစွဲ အချောင်သမား ၀ါဒရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရမ်းကား အုပ်စုတွေဟာ လူနည်းစု ဘာသာဝင်တွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေကတော့ မွတ်စလင်တွေ ဆယ်ဂဏန်းလောက် သေဆုံးခဲ့ရ တယ်လို့ပြောသော်လည်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး လုပ်ဆောင်သူတွေကတော့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အရေအတွက် ရာဂဏန်းအထိ ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှု အများစုဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ . . . . .
အာရှဟာ နယ်ချဲ့တွေနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သြဇာနဲ့ များပြားတဲ့ အရေအတွက်ကို အသုံးပြုပြီး နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ အချို့သော ဘုန်းကြီးတွေဟာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် အသားအရေ ချုံးချုံးကျတဲ့အထိ အစာငတ်ခံကာ အသက်စတေးခဲ့ကြ ဖူးပါတယ်။
အထင်ရှားဆုံးလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ က တောင်ဗီယက်နမ် အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အနေနဲ့ ဆေးဂုံမြို့မှာ ဘုန်းတော်ကြီ Thich Quang Duc ရဲ့ တပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့ကာ အသေခံ ဆန္ဒပြမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေကလွဲလို့ အဲဒီ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြမှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရဲ့ စာနာမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေ အဆုံးသတ်ချိန်မှာ နိုင်ငံရေး စစ်သွေးကြွမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာပါသလား။ ဘယ်ဘာသာရေးမဆို ၄င်းရဲ့အခြေခံ မူဝါဒတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ခံသွားရရင် အဖျက်အင်အားတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလှည့် ရောက်လာပါပြီ။
အမုန်းမန္တန်မန္တလေးမြို့ရှိ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်တွင် တပလ္လင်ခွေချိတ်ထိုင်လျက် လူအရွယ် ၄င်း၏ဓာတ်ပုံများ ချိတ်ထားသော နံရံရှေ့ စင်မြင့်ပေါ်မှ ဦးဝီရသူက သူ၏ကမ္ဘာ့အမြင်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားဟာ အနက်ရောင် မွတ်စလင်သွေး စွန်းနေတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကို အာရပ်တွေက လွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ သူယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အာရပ် အကြမ်းဖက် သမားတွေနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ နှိုင်းယှဉ်ပြတာကိုတော့ အပြစ်မမြင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အစွန်းရောက် လူဆိုးတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဝီရသူက ပြောပါတယ်။ ၄င်းဟာ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထောင်ဒဏ် ချခံရဖူးသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အခုအချိန်မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို အသုံးပြုပြီး လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုကို ခုချိန်မှာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင် နေပါတယ်။ အဲဒီ့လှုပ်ရှားမှုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ ''အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရေးဟာ ဒီမိုကရေစီရေးထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့'' သူက ပြောပါတယ်။
ဦးဝီရသူကို သာမန် ပညာမတတ်ဘဲ မွေးချင်း ၈ ယောက်မှာ မိဘက ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကြီးပြင်ခဲ့ရသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဝီရသူဟာ သြဇာကြီးမားပြီး သူ့ရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာ လူအများကြား ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ လူများစု ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အာရှနိုင်ငံတွေကြားမှာ ၄င်းတို့ရဲ့ ဘာသာကို အခြားဘာသာတွေက တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ယခင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံတို့ဟာ အခုအချိန်မှာ အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် တခြား ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေလည်း အလားတူ ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ သက်သေ အထောက်အထား မရှိသည့်တိုင်အောင် အမျိုးသားရေး ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတွေဟာ ဒေသခံ မွတ်စလင်တွေရဲ့ လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်းဟာ ၄င်းတို့ရဲ့ မွေးဖွားနှုန်းထက် အဆမတန် များပြားမြန်ဆန်နေပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသက ပိုက်ဆံ အထောက်အပံ့တွေက ဗလီသစ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ ပံ့ပိုးနေတယ် ဆိုတာတွေကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်က စစ်တပ်တစ်မတ်သား အစိုးရ စနစ်ကို တည်ထောက်ပေးခဲ့ချိန်ကစလို့ ပြည်သူအနည်းစုသာ စစ်တပ်ရဲ့ ဖိနှိပ်ခဲ့မှုတွေအတွက် အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ဆောင်မှုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ခွင့်လွှတ်သည်းခံမှုကို ပြသနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမယ့် အစွန်းရောက် ၀ါဒတွေကို ပျိုးထောင်ပေးမိပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ ယခင်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် အစွန်းကနေ စတင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားက အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် မွတ်စလင် အများစုနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အနည်းငယ်ရဲ့ အသက်အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ဓားကိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာ ကျေးရွာတွေကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာတစ်ခုတွင် မွတ်စလင် အယောက် ၇၀ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီသွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ အစိုးရရဲ့ အထိမ်းအကွပ်မရှိဘဲ နိုင်ငံရဲ့ အခြားဒေသတွေကိုပါ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ မတ်လအတွင်းမှာ ဆယ်ဂဏန်းထက် မနည်းတဲ့လူတွေ အသတ်ခံရပြီး ထောင်းပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသလို ဗလီတွေလည်း မီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးတွေကို ခုတ်ထစ်သတ်ဖြတ်တာတွေ အမျိုးသမီးတွေကို မီးရှို့သတ်ဖြတ်တာတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ ဘန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင် သွေးဆူနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို လှုံ့ဆော်နေတာ တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ သတင်းထောက် တိုင်းမ်၏ တရုတ်ဌာန အကြီးအကဲ Hannah Beech
မတ်လကုန်လောက်မှာ မိထ္ထီလာမြို့ရဲ့ အဝေးပြေး ကားဝင်းအနီးမှာ နေ့ပေါင်းများစွာကြာအောင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး အသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ မွတ်စလင် ရပ်ကွက်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူအုပ်တွေက ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ (တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နှစ်ဦးနဲ့ မွတ်စလင် အယောက် ၄၀ အသတ်ခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။) မွတ်စလင် ထောင်ပေါင်းများစွာကိုတော့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေအတွင်း ထားရှိခဲ့ပြီး သတင်းထောက်တွေ ၀င်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မက ၁၅ နှစ်အရွယ် Abdul Razak Shahban ရဲ့ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ၁၅ နှစ်သားဟာ အသတ်ခံရတဲ့ ဒေသခံကျောင်းသား အယောက် ၂၀ ထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇတ်ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ရဲ့ခေါင်းကို သံချွန်နဲ့ အရိုက်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ''ကျွန်မသားဟာ မွတ်စလင်ဖြစ်လို့ အသတ်ခံရတာပါ။ တခြားဘာအကြောင်းကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။'' ဟု ရာဇတ်ရဲ့ မိခင်က ဗလီတစ်ခုရဲ့ ပြာပုံဘေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအစ္စလာမ်ကို လက်စားချေလိုစိတ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လွှမ်းမိုလိုမှုတို့ကြောင့် Bodu Bala Sena (BBS) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို သီရိလင်္ကာမှာ ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအင်အားစု တပ်မတော်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ အဆိုပါ အဖွဲ့ဟာ သီရိလင်္ကာမှာ အင်အားအကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပတဲ့ အဆိုပါ အဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံကို မြို့တော် ကိုလမ်ဘိုအနီးမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးအပါး ၁၀၀ ကျော်ကနေ ဦးဆောင်ပြီး မြို့ကိုလှည့်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
အခြားကိုးကွယ်သူတွေကလည်း သာသနာ့အလံတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ညာလက်တွေကို ရင်ဖက်မှာကပ်ပြီး သာနာကို ကာကွယ်ဖို့ သစ္စာဆိုကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ကမှ တည်ထောင်ခဲ့သည့် ယင်းအဖွဲ့က ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမြစ်တွယ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို သမိုင်းဘာသာရပ် သင်ကြားစေပြီး ဆာရီဝတ်ဆင်မှုကို ဥပဒေအရ ပိတ်ပင်ဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သီရိလင်္ကာ လူဦးရေရဲ့ ၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မွတ်စလင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ BBS ရဲ့ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူးနဲ့ ဘုန်းကြီးဖြစ်သူ Galaboda Aththe Gnanasara Thero က နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံတွင် ''ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစိုးရ၊ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်။'' ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
BBS အဖွဲ့ဝင်တွေလို သဘောထား တင်းမာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ၂၆ နှစ်ကြာ တမီးလ် အီလန် ဟိန္ဒူ ကျားသူပုန်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်အကြာက ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ လူနည်းစု မွတ်စလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဘက်ကို များဦးလှည့်လာပါတယ်။ ရှေးရိုးစွဲ သမ္မတ Mahinda Rajapaksa ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ရွေးကောက်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ အုပ်စုတွေဟာ ပိုမိုအင်အား ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီ လများအတွင်းက သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ မွတ်စလင်ပိုင် အထည်ဆိုင်၊ ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာပိုင်အိမ်နဲ့ မွတ်စလင် သားသတ်ရုံတစ်ခုကို ၀င်ရောက်စီးနင်းမှုများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင် ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်ကြောင်း ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေ တွေ့ရှိသည့်တိုင်အောင် မည်သူ့ကိုမျှ အရေးယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရဟာ သီရိလင်္ကာမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပြီးနီးကပ် လာနေပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ ကြီးစိုးတဲ့ ပါတီကိုယ်တိုင်က ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတွင်းမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ မတ်လတွင်းက BBS က တည်ထောင်ထားတဲ့ Buddhist Leadership Academy ရဲ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဖိတ်ကြားခံရသူဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Gotabhaya Rajapaksa ဖြစ်နေပါတယ်။ သူက လက်ရှိသမ္မတနဲ့ ညီအစ်ကိုတော်စပ်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲမှာ ''ဘုန်းကြီးတွေက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နေတာပါ'' လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တောင်ဘက်အစွန်းပိုင်းက ဘုန်းကြီးတွေဟာ အကူအညီ လိုအပ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် အချို့ဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားနဲ့ ဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင် လာကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် အစောပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မသိမ်းပိုက်ခင် အချိန်အထိ Pattani, Yala နဲ့ Narathiwat ဒေသတွေဟာ ယခင်က မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ လက်အောက်ခံ ဆူလတန်အဖြစ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ဒေသတွေရဲ့ လူဦးရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မွတ်စလင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အင်အားကြီးမား လာချိန်မှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ သူတို့တွေဟာလည်း အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းဆရာတွေ၊ စစ်သားတွေနဲ့ အခြားပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ အခြားလုံခြုံရေး အင်အားစုတွေဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲကို ၀င်ရောက်နေရာ ယူထားကြပါတယ်။ ထို့အပြင် မနက်ပိုင်း ဆွမ်းခံထွက်ချိန်မှာ စစ်သားတွေက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဘေးကနေ ခြံရံလိုက်ပါ ပေးကြပါတယ်။ ''ကျွန်တော်တို့မှာ ရွေးစရာ မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်နက်နဲ့ ခွဲခြားလို့ မရတော့ပါဘူး'' လို့ စစ်ဗိုလ်ဖြစ်သူ Sawai Kongsit က ပြောပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ အခြားလုံခြုံရေး အင်အားစုတွေဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲကို ၀င်ရောက်နေရာ ယူထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်ပိုင်း ဆွမ်းခံထွက်ချိန်မှာ စစ်သားတွေက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဘေးကနေ ခြံရံလိုက်ပါ ပေးကြပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့မှာ ရွေးစရာ မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်နက်နဲ့ ခွဲခြားလို့ မရတော့ပါဘူး" လို့ စစ်ဗိုလ်ဖြစ်သူ Sawai Kongsit က ပြောပါတယ် . . . . .
Pattani မြို့ရှိ Lak Muang ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းကြီး ၁၁ ပါးရှိပြီး စခန်းချ နေထိုင်တဲ့စစ်သား အယောက် ၁၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်းရှိ ဘုရားစေတီမှာ ထိုင်းခြေလျင်တပ်ခွဲ အမှတ် ၂၃ အတွက် ယာယီစစ်စခန်းတစ်ခု ချထားပြီး စေတီရဲ့ ပတ်လည်မှာ ရွက်ဖျင်တဲတွေ ထိုးထားကြပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပြည်သူ့စစ်သင်တန်း တက်ရောက်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ ၀ါတော် ၁၆ ၀ါရ Prapaladsuthipong Purassaro က သင်္ဃန်းစစည်းတဲ့ အချိန်ကစလို့ ပစ္စတိုသုံးလက် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ''ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးအနေနဲ့တော့ အပြစ်မကင်းဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဇင်းတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။'' လို့ ပြောပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ စစ်သားတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်းမှာရှိမှ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရမယ်ဆိုရင် မွတ်စလင် လူထုအတွက်တော့ တခြားအဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်နေပါတယ်။ ''စစ်သားတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဟာ ဘာသာရေးနဲ့ စစ်တပ်ကို ရောထွေးလိုက်တာပါပဲ။'' လို့ အိုင်ဟိုင်းရိုး တက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက်ကထိကနဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဘာသာရေး ပဋိပက္ခအကြောင်း စာအုပ်ရေးသားသူ Michael Jerryson က ပြောပါတယ်။ ''ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ကျွန်မတို့ ထိုင်းလူမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ သတ်မှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ကို လူစိမ်းတွေကို ဆက်ဆံနေကြပါတယ်။'' လို့ အခြားအကြမ်းဖက်မှုဖြင့် သံသယရှိသူ ၁၅ ဦးနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံ ရေတပ်စခန်းတစ်ခုကို ၀င်ရောက်စီးနင်းစဉ်က အသတ်ခံရသူ၏ မိခင်ဖြစ်သူ Sumoh Maken က ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မွတ်စလင်တွေလည်း တောင်ပိုင်းမှာ ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အကြမ်းဖက် ခံရမှုတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထက် ပိုပြီးသေဆုံးကြပါတယ်။ ဗုံးခွဲမှုတွေနဲ့ အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေကြောင့် အသတ်ခံနေကြရပါတယ်။ (လူဦးရေ အချိုးအရ ပြန်ကြည့်ရင်တော့ သေဆုံးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အရေအတွက်က ပိုများပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးတိုင်း ဘုန်းကြီးတိုင်းက ဗလီတွေမှာ လက်နက်တွေ ဖွက်ထားတယ် ဒါမှမဟုတ် ဗလီဆရာတိုင်း သေနတ်ကိုင်ဆောင်ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ''အစ္စလာမ်ဟာ အကြမ်းဖက်မှုကို အားပေးတဲ့ ဘာသာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒါကို လူတိုင်းသိပါတယ်။'' လို့ စစ်သားလူထွက် ဘုန်းကြီးဖြစ်သူ Phratong Jiratamo က ပြောပါတယ်။
ဒီလိုသဘောထားဟာ မြန်မာဘင်လာဒင် ထောက်ခံမယ့် ရပ်တည်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဦးဝီရသူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုကို သူ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာရေး နည်းလမ်းအရ ဘယ်လို လက်ခံနိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ''ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဦးဇင်းတို့ကနေ အကြမ်းဖက်လို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။'' လို့ ဦးဇင်းက ပြောပါတယ်။ ညနေပိုင်းတွင် ဦးဝီရသူက တရားနာ ပရိသတ်တွေကို ဟောကြားရာတွင် ပြုံးရွှင်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာ ဆရာမတွေ၊ အဖွားအိုတွေနဲ့ အခြားတရားနာ ပရိသတ်တွေကို သူ့နောက်ကနေ ရွတ်ဆိုခိုင်းတာကတော့ ''ဗမာလူမျိုးစုအတွက် အသက်ပေး စွန့်လွှတ်ပါမည်။'' ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ခွင့်လွှတ်မှု စိတ်ဓာတ်ဟာ လူနည်းစုမှာသာ ကျန်ရှိနေပါတော့တယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက Lak Muang ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီး Watcharapong Suttha ဟာ စစ်သားတွေ ခြံရံပြီး မနက်ဆွမ်းခံ ကြွချိန်မှာ ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းဟာ ဗုံးဆံတွေကြောင့် အမာရွတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အခု အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီး လူထွက်လိုက်တဲ့ အချိန်ထိတိုင်အောင် ကျီးကန်းတောင်းမှောက် မျက်လုံးတွေ၊ ချုပ်ရာအပြည့်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဒီလို တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာ တစ်ခုလုံးကို အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ''အစ္စလာမ်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာတစ်ခုပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ တခြားဘာသာတွေ လိုပါပဲ။ မွတ်စလင်တွေကို အပြစ်တင်နေရင် သူတို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ပြန်တင်မှာပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှု သံသရာ ဘယ်တော့မှ ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။'' လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Hannah Beech (ဟန်နန် ဘိခ်ျ)
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ သတင်းထောက်ဖြစ်ပြီး တိုင်းမ်၏ တရုတ်ဌာန အကြီးအကဲ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ဘေဂျင်းမြို့တော်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ယခင်က ဘန်ကောက်၊ ရှန်ဟိုင်းနှင့် ဟောင်ကောင်တို့အတွက် အခြေစိုက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Excellence in Reporting News, Honourable Mention, in the Society of Publishers in Asia Awards for Editorial Excellence (SOPA) Awards ဆုအား ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားမှုအတွက် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Honourable Mention for Best Opinion Writing ဆုအား ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် Colby College မှ U.S. News & World Report and Asian media outlets ဘာသာရပ်များဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင် မေရီလင်း တက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်သော Harry S. Truman ပညာသင်ဆု ရရှိခဲ့သည်။
ဦးဝီရသူအား မြေထောင်မြှောက်ပေးသော သာသနာပြုဒါယိကာမကြီး Hannah Beech (ဟန်နန် ဘိခ်ျ)အကြောင်း
ဦးဝီရသူအား မြေထောင်မြှောက်ပေးသော သာသနာပြုဒါယိကာမကြီး ဒေါ်ဟန်နန်ဘိခ်ျ ဒါယိကာမကြီး ဒေါ်ဟန်သည် အာရှတွင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာ့ရဟန်းတော်များအတွက် ကမ္ဘာအလယ်သုို့ သတင်းမီဒီယာဖြင့် ဖောက်သည်ချကာ ကောင်းမှု့ကုသုိုလ်ယူလေ့ရှိပါသည်။
သူမသည် လာမယ့် ၂၇ရက်နေ့၊ အင်းစိန် ရန်ကုန်မှာ မျိုးစောင့် ဥပဒေအတွက်ကျင်းပမည့် သံဃာ့ညီလာခံပွဲကို နယူးယောက်ခ်တုိုင်း(မ်)သတင်းစာအတွက် ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့ ဆုိုပြီး မြန်မာနုိုင်ငံသူ၊ သားများ ကြွေးကြော်နုိုင်ရန် တက်ရောက်သတင်းယူမည်ဟုလည်း သိရပါသည်။
တစ်ချိန်က ကမ္ဘာမှာ ဘုန်းကြီးမြင်ရင် “လားမား”ဒါမှဟုတ် “ထုိုင်း”လားဟု မေးမြန်လေ့ရှိသည်။
ကမ္ဘာလူထုကြီးကုို မြန်မာနုိုင်ငံမှာလည်း ဘုန်းတော်ကြီးများရှိကြောင်းကုို သိနုိုင်ဖုို့၊ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများ ကုသုိုလ်ဖြစ်စေဖုို့ဆုိုတဲ့ဆန္ဒဖြင့် 20-6-2013မှာ ဦးဝီရသူအကြောင်းကုိုကြောင်းကုို နယူးယောက်ခ်တုိုင်း သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ထုိုသတင်းအပြီးမှာ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများကုို အမေရိကန်အစုိုးရရဲ့ ဒေါက်ထောက်ကြည့်ခံခြင်း တနည်းအားဖြင့် ဂရုတစုိုက်သေချာကြည့်ခြင်းများဖြင့် ဖူးမျှော်ခံနေရပါသည်။
(The Face of Buddhist Terror) Time Magazine, Vol. 182, No. 1, 20 June, 2013 ၏ မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး ကို ရေးတဲ့Hannah Beech (ဟန်နန် ဘိခ်ျ)အကြောင်း
သူမသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကုို သက်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ ဂုိုအင်ဂါရိပ်သာမှာ ငါးနှစ်၊ မဟာစည်မှာ တစ်နှစ်ခွဲ၊ ဖားအောက်မှာ လေးနှစ်၊ မုိုးကုတ်မှာ ရှစ်နှစ်တိတိ တရားဓမ္မများထုိုင်ဖူးပါသည်။
သူမသည် တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းနှင့် ဝမ်းရေးအတွက် သတင်းထောက်မီဒီယာအလုပ်ကုိုလည်း လုပ်ကုိုင်လေ့ရှိသည်။ သူမလုပ်ခဲ့သော မီဒီယာလုပ်ငန်းမှာ အောက်ပါအတုိုင်းဖြစ်သည်။
သူမသည် တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ သတင်းထောက်ဖြစ်ပြီး တိုင်းမ်၏ တရုတ်ဌာန အကြီးအကဲ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ဘေဂျင်းမြို့တော်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ယခင်က ဘန်ကောက်၊ ရှန်ဟိုင်းနှင့် ဟောင်ကောင်တို့အတွက် အခြေစိုက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Excellence in Reporting News, Honourable Mention, in the Society of Publishers in Asia Awards for Editorial Excellence (SOPA) Awards ဆုအား ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားမှုအတွက် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Honourable Mention for Best Opinion Writing ဆုအား ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် Colby College မှ U.S. News & World Report and Asian media outlets ဘာသာရပ်များဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင် မေရီလင်း တက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်သော Harry S. Truman ပညာသင်ဆု ရရှိခဲ့သည်။
"အိုဘယ့် မြန်မာပြည် ...
နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ (၈၉) ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ... အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုတာ လူနည်းစုပါ... ခရစ်ယာန်နဲ့ အခြားဘာသာဝင်ဆိုတာကလဲ မပြောပလောက်တဲ့ ပမာဏပါပဲ... နိုင်ငံတော် သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ဝါဒီ သခင်နုတုန်းကတော့ နိုင်ငံတော်ဘာသာ ဆိုတာကို လေသံလေးပဲ ပစ်သွားတာပါ... နိုင်ငံရေး အခဲမကြေမှုတွေ၊ တင်းမာမှုတွေ စိုးရိမ်မှတ်ကို ရောက်နေတဲ့ ကာလမှာ သခင်နုရဲ့ နိုင်ငံတော်ဘာသာအရေးက တိုင်းပြည်ကြီးကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်၊ ခွက်ထိုးခွက်လှန် ဖြစ်စေခဲ့တာပါ... ဒါတောင် လေသံလေးပဲ ပစ်ခဲ့တာနော်... အာဏာရှင် လက်အောက်က မြန်မာပြည်အကြောင်း ပြန်စမြုံ့ပြန်လိုက်တိုင်း အာဏာသိမ်း ဗီလိန်ကြီး နေ၀င်းကိုပဲ ပြေးမြင်ကြမှာပါ... ဇာတ်လိုက်ကျော် သခင်နုကတော့ မြို့မေတ္တာခံယူမြဲပေါ့လေ... ဟုန်းဟုန်းတောက် လောင်လုဆဲဆဲ လောင်စာကို မီးစတို့ခဲ့သူကတော့ မဇ္ဈိမပဋိပဋာကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော် သခင်နုပါပဲ...
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံကလည်း သမိုင်းတပတ် လည်သလိုပါပဲ... နိုင်ငံရေးကိစ္စ မပြေလည်ရတဲ့ ကြားထဲ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေ၊ မဆင်မခြင်ပြုမူ ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကြောင့် မြန်မာတွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူ့နေရာသူ ပြန်ရသွားပါပြီ (မှူးဇော်၏ လေသံဖြင့် :D)... နဂိုအတိုင်းလေးပဲ ကောင်းပါတယ် လို့များ တွေးကြလေသလား မသိ...
သခင်နုတုန်းက လေသံပဲ ပစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို နောက်ပိုင်း သခင်လေးတွေ၊ သခင်ကြီးတွေက လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြတာ အားလုံးအသိပါပဲ... သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာန (Department for the Promotion And Propagation of Sasana)ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ အစိုးရဌာနကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲလို့ တခြားဘယ်ဘာသာရဲ့ သာသနာကိုများ ထွန်ကားပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်နေပါသလဲ... နိုင်ငံတော်ရဲ့ အာဏာသုံးရပ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးဟာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိခဲ့တာပါ... လက်ရှိလဲ ရှိနေဆဲပါ... နောင်လဲ ဆက်ရှိနေဦးမှာပါ... ဒီလို အာဏာလက်ကိုင်ထားတဲ့ လူမျိုးကြီးက ‘အမျိုးပျောက်မှာ တွေးကြောက်စရာ’လို့ ထအော်နေမယ်ဆိုရင် အာဏာမဲ့၊ ဓနမဲ့၊ ပညာမဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကို နည်းနည်းတော့ အားနာကြပါဦး…. ခင်ဗျားတို့မှာ အချုပ်အခြာအာဏာရှိတယ်… ဥပဒေကို ကြက်ပေါင်ကြိုးလို လိုတစ်မျိုး၊ မလိုတစ်မျိုး ကြိုက်သလို ပြဌာန်းခွင့် ရှိတယ်… ပြေပြေလည်လည်လုပ်ကြပါ… ဆန္ဒ မစောကြပါနဲ့ … (ဒေါက်တာမောင်မောင်ကို အမှတ်ရသဗျ…)
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခက သခင်နုလက်ထက်ကထက် ပိုဆိုးပါတယ်… နားမလည်၊ ပါးမလည် လဒူတွေကလည်း အနာတောင် မကျက်သေးတဲ့ ကချင်ကို ဗုဒ္ဓဆင်းတု သွားပေးသတဲ့ဗျာ… ကချင်လူမျိုးဟာ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါတုန်းကမှာ Idolatry မဟုတ်ခဲ့ကြဘူးဆိုတာ နားမလည်လေရော.သလား... ဆင်းတုတောင် ရိုးရိုးဆင်းတုဆို တော်သေး… အခုဟာက ကချင်ကို ပစ်တဲ့ သေနတ်ကျည်ဆံခွံနဲ့ သွန်းလုပ်ထားတဲ့ ဆင်းတုတဲ့… ကောင်းရော…
စဉ်းစဉ်းစားစား၊ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နဲ့ ပြေပြေလည်လည် လုပ်ကြပါ… ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး မပုပ်ပါစေနဲ့… သမိုင်းတရားခံ အဖြစ်မခံပါနဲ့… Time မဂ္ဂဇင်းကို ပြစ်တင်ဝေဖန်နေမယ့်အစား လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြပါ…
သင့်ကြောင့် ………………………….. မဖြစ်ပါစေနဲ့…" share By: facebookZau Man Hpunggan
at 6/23/2013 04:57:00 PM